Miyaad Qaadatay Myers-Briggs? ENTP? | Martech Zone
Dhamaanteen waan necbahay in lagu tuuro baaldi, laakiin waxaan la galay wadahadal weyn qof aan la socdo Myers-Briggs Natiijooyinka waligood kuma kala duwanaan tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan ahay ENTP. Waa tan hoostana:
ENTPs waxay qiimeeyaan awooda ay u leeyihiin inay adeegsadaan male iyo hal-abuurnimo si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka. Ku kalsoonaanta caqligooda si looga saaro dhibaatada, waxay inta badan iska indhatiraan inay si ku filan ugu diyaargaroobaan xaalad kasta oo la soo bandhigo. Astaamahan, oo ay weheliso u janjeera inay dhayalsadaan waqtiga loo baahan yahay si loo dhammaystiro mashruuc, waxay sababi kartaa in barnaamijka 'ENTP' uu noqdo mid aad loo dheereeyo, iyo inuu si joogto ah u shaqeeyo wixii ka dambeeya xadka waqtiga la filayo. Xaaladda sii adkeynaysa waa saadaalkooda ah inay tijaabiyaan xalal cusub. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo jecel inay u gudbaan caqabadda soo socota marka ay wax caajis noqdaan. ENTP-yada waxay culeys dareemaan marka awooddooda wax ku oolla aysan waxtar lahayn waxayna iska ilaalin doonaan duruufaha laga yaabo inay ku fashilmaan.
Haddii walaaca sii socdo, ENTP-yada ayaa jahawareersan oo aragtidooda “way sameyn karaan” ayaa la hanjabayaa. Dareenka karti-darrada, habacsanaanta, iyo ku-filnaanshaha ayaa la wareegaya. Waxay ubaahan yahiin inay ka baxsadaan xaaladaha laxiriira walwalka waxay caan ku yihiin ENTP marka loo eego noocyada shaqsiyadeed ee kale. Iyagoo shaki ka qaba inay heli doonaan waxa ay u baahan tahay si ay u gutaan hawl, waxay baqdintooda ugu rogaan xaaladaha ay ka maarmi karaan. Argagax, cabsi, iyo walwal ayaa markaa xannibaya muujinta hal-abuurkooda. Falcelinta ficil-celinta is-difaacku waxay u horseedaa ENTP inay hareer marto ku guuleysiga meelaha kale ayna ka hortagto guusha ay ku dadaalayaan.
Waa wax lala yaabo (iyo jahwareer) sida saxda ah ee qeexitaankani aniga ii khuseeyo. Haddii aad jeclaan lahayd inaad eegto shakhsiyaddaada, waxaa jira waxyaabo badan ilaha internetka. Myers Briggs ayaa kaa caawin kara cilaaqaadka aad la leedahay shaqaalaha kale iyo macaamiisha, sidoo kale waxay ku siin kartaa aragti ku saabsan meelaha laga yaabo inaad u baahato inaad diirada saarto inaad ku guuleysato.
Tags: dameerrodufanjim irsaykoritaanka wareegadaaqadahataleefanka daaqadaha
Waxaan ahay ENTJ. Gabi ahaanba waan ku raacsanahay - natiijooyinkani waa kuwo naxariis darro ah oo daacad ah.
Doug, sidoo kale waxaad tahay Taurus, sidaa darteed waxaad tahay shaqsi deggan, muxaafid ah, qof jecel guriga oo had iyo jeer sameeya saaxiib daacad ah ama lammaane. Waxaan sidoo kale maqlay inaad jeceshahay socodka dheer ee xeebta qorrax dhaca.
Dadku waxay u muuqdaan inay aqoonsadaan qaybo ka mid ah tijaabooyinka shakhsiyadeed ee ay ku heshiin karaan inay aqbalaan. Xitaa goobta Myers-Briggs, waxay xusayaan in natiijooyinka aysan ansax ahayn 15-47% waqtiga. Aad ayaan uga shakisanahay imtixaanadan. Xitaa waxaan si ula kac ah u qaatay imtixaanadan si qaldan, walina shaqaalaha / loo shaqeeyaha waxay dareemeen in natiijooyinka ay si sax ah u matalayaan shakhsiyadeyda, (oo aan isku dayay inaan wax ka qabto.)
Ka jawaab "Haa" dhammaan su'aalaha ku jira imtixaanka khadka tooska ah ee 'Myers-Briggs', oo fiiri haddii aad weli aqoonsan karto natiijooyinka. (Iska ilow waraaqaha iyo jawaabaha aad had iyo jeer hesho.)
Waxaan ahay Aries remember xasuus adag!
Sep 17, 2008 at 10: 56 PM
Mudane Douglass, waxaan jeclaan lahaa inaan kugula tartamo inaad tixgeliso qaadashada Myers Briggs meel ku habboon, jawi anshax leh. http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html
Waad aragtay, markii loo maamulo si ku habboon, ADIGU waad go aansan kartaa adigoo ku saleynaya helitaanka waxa ay doorbidayaan oo dhami macnahoodu yahay, waxa aad door bidday ay tahay. Waa anshax xumo, sida loogu talagalay Myers Briggs, in la qaato Qiimeynta ka dibna lagu qeexo nooca aad soo sheegtay. Markii si anshax leh loo dhammeeyo, AAD doorataa (naftaada xusho), ka dib waxaad isbarbar dhigeysaa nooca la soo sheegay, ka dibna ADIGA ayaa qiimeynaya labada si aad u go'aamiso NOOCAADA UGU FIICAN. MARKAa… iyo ka dib markaa, Myers Briggs si buuxda uma la qabsato 'awoodeeda buuxda: kaa caawinaysa inaad wax badan ka fahamto adiga, si aad si fiican dadka u fahamto. baadhid http://www.type-resources.com/ExploringYou/protostart.html nooca khadka tooska ah ee habka anshaxa ee lagu ogaanayo naftaada adoo adeegsanaya Myers Briggs Type Indicator. Waa wax lagu farxo, marka si sax ah loo maamulo. Ku farax safarka dhamaantiis…
Heh, macangag, Aniguba waxaan ahay ENTP (xadka INTP). Sharaxaadyaduna waa baro, ugu yaraan aniga ahaan.
Waxaan ahay ESTJ halkan!
Waxaan ahay INFP.
Si kasta oo aan u qaato imtixaanadan (ama mid ka mid ah tijaabooyinkan aan sameeyo) had iyo jeer waxay la soo baxdaa isku si. Marka waxaan u maleynayaa inaan ku dhegannahay (waana ku habboon tahay sidoo kale…)
Aniguna waxaan ahay Aries 🙂
Aug 23, 2008 at 2: 33 AM
Taasi waa wax cajiib ah. Waxaan ahay ENTP + Aries sidoo kale. Waxaan ka helay qeexitaannada labadoodaba inay iskaga mid yihiin runna ii yihiin
28, 2012 at 2: 21 PM
Waxaan ahay haweeneyda 'EN ENTP', oo ku saabsan inay ka bilawdo masters-ka suuq-geynta & hal-abuurka London. Weli ma aanan is taagin aniga oo la xiriira suuqa shaqada. Talo sare ee maskaxdaada ah aniga Karr? 🙂
28, 2012 at 2: 29 PM
@yasminebennis: disqus qiyaastii toban sano ka hor waxaan bilaabay blog-ka waxayna isbedeshay noloshayda. Hada balooggu waa xarun udub dhexaad u ah Wakaaladdayda (DK New Media). Dhammaantood waxay ku bilaabeen iyagoo la wadaagaya natiijooyinkeyga iyo waaya aragnimadayda internetka qof walba… Waxaan si tartiib tartiib ah ugu dhisay maamul iyo magac booskii la ixtiraamo. Had iyo jeer waxaan isku dayaa inaan noqdo qof wanaagsan oo aan la wadaago shakhsiyadayda sidoo kale (in kasta oo aan ku degay Ilaah iyo siyaasadda) :). Waxaan u maleynayaa inaad bilowdo bartaada gaarka ah ama aad weydiisato inaad noqoto qoraa wax ku biiriya mid ka mid ah danahaaga waxay noqon doontaa hab fiican oo lagu bilaabo.
28, 2012 at 2: 38 PM
Tani waa wax la yaab leh! Waxaan go aansaday uun inaan abuuro baloog 4 maalmood kahor! Iyada oo loo marayo, waxaan ka wada hadli doonaa dhinacyada hal-abuurnimada Farshaxanka, Ganacsiga iyo nolol maalmeedka. Waxaan jeclaan lahaa aragtidaada mar ay diyaar noqoto! Waad ku mahadsantahay jawaab celintaada degdega ah !!
30, 2012 at 9: 08 PM